Makeup, ukufihla amaphutha ebusweni
Ubuhle besifazane Makeup
I-Coco Chanel edumile yathi le nkulumo, kamuva eyaba yindabuko: "Uma owesifazane oneminyaka engamashumi amathathu engakabi ubuhle, ke uyisiwula." Ngeshwa, iningi lethu linamaphutha athile ekubukeni, futhi ubuciko bokuba owesifazane omuhle unamandla okulungisa amaphutha esikhwameni sabo. Ukulungisa ukungaphumeleli ngosizo lokwakheka, sifunda kule ncwadi futhi sikutshele ukuthi ungalungisa kanjani amaphutha amancane okubona ngamehlo. _ Amakhekhe "emahlombe" anzima
Uma amehlo ngaphansi kwamajwabu amehlo, njenge-hood, amajwabu amehlo anjengekhefu ahlanganisa amehlo abo.
ukubuyisela amajwabu amehlo azayo.
1. Hlela ukuma kwamashiya. Phakamisa iphuzu leshiya kanye nengxenye encane yehla.
2. Esikhathini sejwabu leso ephathekayo nasemgqeni we-eyelashes sifaka noma sinikeza ithoni elimnyama. Ngalolu hlobo leso, dweba umjikelezo kancane kancane futhi kancane kancane.
3. Yenza ucingo ngaphansi kwe-eyelashes ephansi. Ungakhohlwa ngalesi senzo.
4. Ngalolu hlobo leso, ukudonsa okukhipha amanzi akusikiswanga.
5. Sisebenzisa ithoni elimnyama emngceleni wesikhathi esisezingeni eliphezulu ngejwabu leso elinqunyiwe futhi lo mgqa uvulekile.
6. Faka ithoni yokukhanya endaweni ngaphansi kwamashiya.
Ungafaki izithunzi ezimnyama phezu kweminyaka yonke, ungathathwa ngokusebenzisa amathoni wokukhanya endaweni ngaphansi kwamashiya.
Kulokhu, ukuma kwamashiya kubalulekile. Kusuka emajukwini anzima ungakwazi ukuguqula ukunakwa nge-arc enhle.
Ama-Makeup for eyes bulging
Uma amehlo namajwabu amehlo ubheka ngokumelene nesizinda sobuso futhi zikhulu kakhulu, khona-ke unamahloni.
Ukubukeka "phakamisa" amehlo, ukuze "babuye" emuva.
Ithembo elimnyama lisetshenziselwa yonke ijwabu leso leselula kusukela emgqeni we-eyelashes.
2. Ngalolu hlobo lwamehlo, asisebenzisi ama-shadow nge-mother-of-pearl nemibala elula, njengoba lokhu kuzokwenzela amehlo nakakhulu.
3. Engxenyeni eyikhulu yekhulu leminyaka, sibeka ithoni elimnyama futhi silithuthukise emaceleni angaphandle.
4. Sidonsa ijwabu leso elingaphansi ngepensela emnyama.
5. Sibeka ithoni elula ngaphansi kweshiya.
6. Sisebenzisa umjikelezo wezintambo eziphezulu.
Ngosizo lwezimthunzi ezintathu zemithunzi sakha umphumela we-chiaroscuro, ngethunzi elimnyama elisetshenziselwa umjikelezo we-eyelashes, umthunzi okhanyayo usebenze eduze kwamashiya.
Amathoni alula kujwabu leso leselula awenzi, kungenjalo amehlo azobukeka evelele kakhulu. I-contour noma umthunzi ojulile osetshenziselwa amajwabu amehlo uzobuyisa amehlo.
I-Makeup yezinzwa eziseduze
Ngokwesilinganiso, ibanga eliphakathi kwamehlo kufanele lilingane nobubanzi beso. Uma amehlo ayingcosana ngaphandle komunye nomunye, ke unamehlo asondelene.
Dala ukukhohlisa ukuthi amehlo atholakala kancane kancane.
1. Senza umugqa (podvodka) ngepensela elithambile eceleni komjikelezo wemivimbo yezingenhla, ukwandise ngaphesheya kwemingcele yeso, njengokungathi uqhubeka nomjikelezo. Umugqa awufanele ucace, uvuliwe emaceleni angaphandle.
Ithembo elikhanyayo lezithunzi lisetshenziselwa izingxenye eziphakathi nangaphakathi zeso.
3. Ngaphandle kweso, lapho indawo ikhona khona, eduze kwamathempeli, izithunzi kufanele zibe mnyama kancane.
4. I- mascara isetshenziselwa ama-eyelashes, atholakala eduze kwezingxenyeni zangaphandle zeso. Sifaka i-eyelashes ethempelini, ngaphakathi kweso, sisondele ekhaleni, sibangcolise kancane.
5. Yenza amashiya amancane, asuse izinwele ezingaphezu kwebhuloho ekhaleni, phezu kwekhoneni elingaphakathi kweso, futhi unciphise kancane amathiphu amashiya epensela lamashiya.
6. Ngaphansi kwe-brow sibeka ithoni elula.
Amakhonko angaphakathi kanye nendawo ezungeze impumulo kufanele ikhanyiswe, lokhu kuzosiza "ukusabalalisa" amehlo. Gxilisa amathoni amnyama emaceleni angaphandle.
Ukwakha amehlo ahlabayo, sizosebenzisa i-beige noma i-eyeliner emhlophe ezungeza "izicubu ezimanzi" zangaphakathi.
Ama-Makeup for amehlo ahlukene kakhulu
Uma ibanga eliphakathi kwamehlo libanzi kunomkhawulo wehlo, amehlo abhekwa njengendawo evulekile.
Dala umbono wokuthi amehlo asondelene.
1. Senza ukulungiswa ngendwangu ye-eyelashes, kusukela ekhoneni elingaphakathi leso kuya ekhoneni langaphandle leso futhi uqede emngceleni wehlo. Amehlo kufanele avezwe ngokucacile.
2. I- shadow shades neyomnyama isetshenziselwa izingxenyeni zangaphakathi zamehlo. Kubonakala sengathi "ikhonteli" elihle, esiludonsela ngezithunzi ezimnyama ezivela ekhoneni elingaphakathi kwamehlo kuya phezulu, kuya engxenyeni enkulu yeshiya.
3. Akukhuthazwa ukusebenzisa ithoni elimnyama emngceleni wekhulu leminyaka.
4 . Ithembo elikhanyayo lisetshenziselwa indawo ngaphansi kwamajwabu amehlo namashiya.
5. I- mascara isetshenziswe ngokuqinile kuwo wonke ama-eyelashes, atholakala eduze nekhoneni elingaphakathi leso. Ama-eyelashes, atholakala eduze kwekhoneni elingaphandle leso, ibala kancane.
6. Amaconsi ebhuloho lempumlo asondelene kakhulu, ngoba lokhu sisebenzisa ipensela yamashiya.
Kulesi simo, siba mnyama izinsika zangaphakathi zamehlo eduze kwebhuloho lempumu kunezinye izimo zamehlo. Ukujula kombala kuzosiza le ndawo ukuba ihambe kancane, futhi amehlo azobukeka asondelene.
Sizoqala ngokufaka umbala omnyama, sisuka emagumbini angaphandle angaphakathi, futhi sivule izithunzi ezibheke emakhaleni nasenyakatho.
Ama-Makeup wezintambo ezijulile
Amehlo anjalo aphansi kakhulu emaceleni amahlo. Ama-arches superciliary aqhubekela phezulu, kunanoma yiluphi uhlobo lweso.
Yenza amehlo akho abonakale futhi "hamba phambili".
Ithembo elikhanyayo kunazo zonke lezithunzi lisetshenziselwa phezu kwendawo yonke yeselula kusukela eyelashes kuya emkhombeni.
2. Ngethoni elimnyama, faka indawo eduze komphongolo. Ngokuseduze kwe-eyelashes sisebenzisa ithoni elikhanyayo lezithunzi. Kuseduze nomngcele we-mobile age nge-ijwabu leso elingenalutho, ithoni imnyama kancane. Ngaphakathi ngqo, ungabi mnyama.
3. Uma ibanga elivela emhlanjeni kuya emanzini lincane, khona-ke ithoni elimnyama livuliwe phezulu ukusuka emhlanjeni ohlangothini lwamashiya.
4. Sibeka i-liner engxenyeni yangaphandle ye-brow, eceleni kwendwangu ye-eyelashes, ukuze "iqhube" kancane. Umzila kufanele ube mncane.
5. Sizodlulisa ithoni ye-contour ngaphansi komugqa wemivimbo engaphansi.
6. Njenge-liner, ungasebenzisi amapensela amnyama, akhanyayo.
Ijwabu leso elimnyama alifanelekile kulolu hlobo lwamehlo. Masikhanyise amehlo ajulile kakhulu, ukuze "baqhubeke" phambili. Musa ukugqamisa indawo ngaphansi kwamashiya, ikhishwa ngokwanele.
Ungamnyama ijwabu leso, lizofihla amehlo akho, futhi lizobonakala lincane.
Ukuze senze amehlo avelele, sisebenzisa ithoni elikhanyayo lezithunzi.
Udinga ukulinganisa amathebhu we-matte ne-flickering of the shadows. Futhi kubalulekile ukuthatha lo mzuzwana esikhathini sokwenza. Uma ukwakheka kwamehlo kukwedlulele ngezingxenye ezishintshayo, umama weparele futhi ukhazimule, lokhu kuzokwenza umphumela we-glare amabili ongafundile nokungaqondakali ebusweni. Ngaphezu kwalokho, umama-we-pearl ugcizelela ngokugcwele konke ukungaphumeleli ebusweni - amahlombe wamehlo nemibimbi emincane.
Ngesizo sokwakheka ungalungisa iziphambeko zeso. Ngokuvamile, abesifazane abenza i-holiday make-up bakhetha indlela yokwenza "amehlo aphunga". Kodwa lokhu kulungiselelwa kungase kungakulungele wonke umuntu, ngoba ubude obubonakalayo futhi kunciphisa amehlo. Futhi ubani onokukhubazeka kwamehlo njengamehlo ajulile, ukuzenzela okunjalo akufanelanga, futhi ugweme umshini omanzi omnyama phezu kweso elimnandi. Ubuhle bamehlo bungagcizelela futhi kususwe ezinye izithiyo, uma ukuzenzeka kusetshenziswanga hhayi nje imithunzi ye-shades, kepha khetha umdlalo wesithunzi nokukhanya. Lokhu kuzonikeza amehlo okuveza nokujula. Kulokhu, okungenani udinga ukusebenzisa ama-shadow shades amabili - obumnyama nokukhanya.
Ungakhetha kanjani ukwakheka okulungile kokubukeka kwakho?
I-Peach - umkhiqizo wehlobo-2017: imikhiqizo ye-TOP-4 ye-makeup anti-age
Ukuzenzela okuhle: izinto ezintsha zeqoqo lobuhle uPaul & Joe
I-Chic Intellectual: Yenza abalandeli bezibuko
Ungenza kanjani ukwakheka kusihlwa?
"Ama-confectionery" amashayimu weqoqo le-MAC Soft Serve
Izinhlobo zokuzikhandla kanye nenhloso yazo
Ukuphila okunempilo - impumelelo yokuphila isikhathi eside
I-Jamaica iyipharadesi yaseCaribbean yabaholi bamaholide
Ungasusa kanjani isikhunta kusuka endlini yokugezela?
Makeup in the style of Beyonce
Ungenza kanjani ukwakheka okubhemayo?
USergei Senin wakhuluma ngezimfihlo zokuvumelana uLyudmila Gurchenko
Uninazala nomalokazana endlini eyodwa
Intombazane ibheke nini kumfana?
I-apricot dessert ngobisi oluncibilikile